Machining Parts Manufacturers na Suppliers - China machining Parts Factory
High Quality Guide Wheel Ji N'ihi Prefabricated Construction Machinery
Ntuziaka Nduzibụ akụkụ dị mkpa eji na mgbakọ na-ewu machinery.In mmepụta akara, ọ na-bụ-eji maka ndu njem na nkwado nke die table. Ekwesịrị ikpebi usoro nrụnye nke ụkwụ ụkwụ na-eje ije dị ka ọnọdụ dị na saịtị ahụ si dị - gbanye H nchara ma ọ bụ wụnye bọọdụ ngosi.
High Quality ibe ya bụrụ Flange
Flange nke a makwaara dị ka Flange Flange plate.Flange bụ oghere na akụkụ ejikọtara okporo osisi, nke ejiri maka njikọ dị n'etiti ngwụcha ọkpọkọ; Ọ bakwara uru maka flange na ntinye na ụzọ nke akụrụngwa maka njikọ n'etiti ngwaọrụ abụọ.
High nkenke ibe ya bụrụ Gear maka Machinery na Auto Parts
Gear na-ezo aka gia na rim nke na-aga n'ihu meshing nnyefe nke ije na ike nke n'ibu mmiri, site gia eze, ezé uzo, ihu ihu, nkịtị ihu, eze n'elu gburugburu, nha nha mgbọrọgwụ gburugburu, isi gburugburu, nkerisi gburugburu na ndị ọzọ akụkụ, ọ na ọtụtụ-eji n'ibu nnyefe na dum n'ibu ubi.
Ọrụ nke gia bụ tumadi iji nyefee ike, ọ nwere ike ịnyefe ntụgharị nke okporo osisi na ọdụ ọzọ, ngwakọta gia dị iche iche nwere ike ịrụ ọrụ dị iche, nwere ike ịghọta ntụgharị uche igwe, uto, ngbanwe ihu na ntụgharị usoro, isi ngwaọrụ ngwaọrụ bụ enweghị ike ịpụ iche na gia.
E nwere ọtụtụ ụdị gia. Dị ka nhazi ọkwa nke osisi gear, enwere ike kewaa ya n'ime ụdị atọ: ihe nkedo osisi yiri nke ọma, nke na-etinye ihe nkedo na ntanetị. N'etiti ha, ihe nkedo osisi yiri nke ahụ gụnyekwa ihe nkedo, ihe nkedo, ihe nkedo, ihe nkedo, ihe mkpuchi na ihe mkpuchi he wdg, na ihe ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ, ihe ndị a na-atụgharị anya, ihe nkedo a na-atụgharị, wdg gia, ikpuru gear, hypoid gear na na.